Virus ရှိမရှိ « i-Collection
ကွန်ပျူတာမှာ Virus အကိုက်ခံထားခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်း။
Antivirus Software တင်မထားမိလို့ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။
Software မရှိဘဲ စစ်တဲ့ နည်းတွေ တော်တော်များများ ရှိပါတယ်။
Tools Menu က Folder Options ပျောက်နေ ပါသလား။
Command Prompt, Registry, Task Manager ကိုဝင်တိုင်း ကွန်ပျူတာ Restart ကျသွားပါသလား။
Administrator Account ဖြစ်ရဲ့ သားနဲ့ Registry Editor, Task Manager ဖွင့်မရ ဖြစ်နေပါသလား။
Hidden Files, Hidden System Files တွေကို ဖော်မရ ဖြစ်နေပါသလား။
Folder တွေကို Double Click နှိပ်လိုက်တိုင်း My Documents Folder ပဲ ပေါ်နေသလား၊ ဒါမှမဟုတ် Folder လည်း မပွင့် ဘာမျှလည်း တက်မလာ ဖြစ်နေပါသလား။
Memory Stick ရဲ့ Drive ပေါ်မှာ Right Click နှိပ်လိုက်ရင် Open က ထိပ်ဆုံး ရောက်နေမယ့် အစား Autoplay က ထိပ်ဆုံး ရောက်နေပါသလား။
Drive တွေ၊ Memory Stick တွေကို double Click နှိပ်လိုက်တိုင်း Open With Box ပဲ ပေါ် နေပါသလား။
Memory Stick ထဲက Folder တွေပေါ်မှာ Right Click နှိပ်ပြီး Properties ကိုရွေးရင် Type မှာ File Folder လို့ ပေါ်မယ့်အစား Application လို့ ပေါ်နေပါသလား။
My Folder ဆိုတဲ့ Folder အောက်မှာ My Folder.exe ကို တွေ့  နေရပါသလား။ (ဆိုလိုသည်မှာ Folder ၏ နာမည်နှင့် တူသော exe ၀င်ရောက် နေပါသလား။)
Task Manager ကို ဖွင့်ပါ။ (Ctrl + Alt + Del) Flashy, Fun, New Folder စတဲ့ Process တွေ Run နေသလား ကြည့်ပါ။ ( Run နေတယ် ဆိုရင် ဘယ် Memory Stick မှ မတတ်ပါနှင့်။ Virus ချက်ချင်း ကူးဆက် ခံရနိုင်ပါတယ်။ Stick ကို Format ချလည်း အပိုပါပဲ။ ကိုယ်ကို Format ချပြီးတာနဲ့ Virus ကပြန်ဝင်နိုင်ပါတယ်။ )
အထက်ပါ အချက်တွေထဲက တစ်ခုခု ခင်ဗျားစက်မှာ ဖြစ်နေပြီဆိုရင် သေချာသလောက်နီးပါး Virus သို့မဟုတ် trojan သို့မဟုတ် spyware တစ်ခုခု စက်ထဲမှာရှိနေပြီလို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ အခြား စစ်ဆေးနည်းတွေလည်း အများကြီးရှိပါသေးတယ်။
ထိန်လင်းထူး (virus ဖျက်ဆီးသမျှ) ကွန်ပျူတာဂျာနယ် ၂၀၀၈ခုနှစ်၊ ဇန္န၀ါရီလ၊ အမှတ်၁၆၇ မှ ထုတ်နှုတ် ဖေါ်ပြသည်။
July 24, 2008 - Posted by	uth |
Knowledge	1 Comment	»
I want to know how to getalogo in gtalk.
Comment	by	Kyaw Lwin Hein |
September 8, 2008 | Reply	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...
Welcome i – Collection
……. မင်္ဂလာပါ ……. ကျွန်တော့ရဲ့ Blog ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု လေ့လာသူအားလုံးကို ကြိုဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော် ဒီ Blog လေးကို အချိန်အား၊ လူအား၊ ငွေအား များစွာရင်းနှီးပြီး ရေးသားခဲ့ရသော်လည်းပဲ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုသူများ အတွက် အတိုင်းအတာတစ်ခု အထိ အကျိုးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျေနပ်ပါပြီ။ ကျွန်တော် အနှစ်ခြိုက်ဆုံး Software များ၊ Freeware များ၊ Add-on များ၊ Web Site များ အပြင် ကျွန်တော် လေ့လာဖတ်ရှု မှတ်သားခဲ့သမျှ ဗဟုသုတများကိုလည်း တစ်စုတစ်စည်းထဲ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ Welcome
XP ရဲ့ ရိုးစင်းတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်
အသုံးချ Software များ
စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ မြန်မာ Website များ
Search Engine, Tutorial, Ebook, Computer Buying, Education, Community, Music, Movie, Art & Craft, Directory, Forum, Sport & Soccer, Journal & Magazine, Chatting, Ecards, Spaces and Social Network စသည့် Website address( 78 )
emailလိပ်စာ (44), Email tools လိပ်စာ (7) နှင့် Miscellaneous Mail Services လိပ်စာ (22)
Gmail အတွက် အစွမ်းထက်နည်းလမ်း
၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ ဇန္န၀ါရီလ မှ.. ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်္ဘာလ ထိ
Chat Clients Pages
Online မှာ File တွေ သိမ်းကြမလား ???	Meta
WordPress.com	Go to del.icio.us
ktlinn2008 on Alpha Zawgyi Unicodekhinzawhein on Alpha Zawgyi Unicodetkyawthu on Admin Password မေ့သွားလားMinn Zaw Oo on Alpha Zawgyi Unicodekgb on Font Converter	Site info